Semalt: 4 Amathuluzi Okudweba Ulwazi Ozogcina Isikhathi Sakho
Ukuhlela kufanele kube yingxenye yesayensi yedatha. Omunye kufanele athuthukise amakhono ahle kakhulu okuhlela ukwenza idatha ngesandla. Kodwa-ke, abanye abantu abakwazi ukufunda izilimi ezahlukene zokubhala futhi babheke ezinye izindlela ezifanele. Amathuluzi wokubala wedatha alandelayo alungele abangebona izinhlelo - gume sarajevo.
1. I-Kimono Labs
I-Kimono Labs iye yahlala isikhathi esithile. Lenye yezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu futhi eziyinkimbinkimbi zokwehlisa idatha. Lolu hlelo oluvulekile luvela encwadini yesilingo sezinsuku ezingu-15, kodwa inguqulo yaso yamahhala iyatholakala. I-Kimono Labs ihlaziya yonke iwebhusayithi, kusukela ekuqoqweni kwedatha kuze kulandwe futhi kuqinisekiswe futhi kuthunyelwe. I-Kimono Labs iphinde isebenze njenge-crawler enamandla kakhulu futhi ingasetshenziswa ngaphandle kwekhodi. Ngaphezulu kwalokho, ikuvumela ukuba uqale inombolo enkulu yamasayithi ngesikhathi esifanayo futhi ungathinteki kwikhwalithi nhlobo. I-Kimono Labs ihlale iyisinqumo sokuqala samabhizinisi, esetshenziselwa ukuqoqwa kwedatha, ukuboniswa, nokuhlelwa. Iphinde isebenzise i-big-data analytics kubasebenzisi bayo, okwenza umsebenzi wabo ube lula.
Idatha yokudweba kwabangewona izinhlelo yayingakaze ibe lula ngaphambili. Kuyinto yesikhulumi esenziwe ngokuzenzakalela sewebhu webhubhu esakhiwe ochwepheshe kanye nezimangalo ukuthi zenze inani elikhulu lamakhasi wewebhu kuze kube manje. Ngenisa. Io mkhulu hhayi nje kuphela kwabangewona izinhlelo kodwa nakuzo ososayensi bedatha. Leli thuluzi lizitholela ngokuzenzekelayo ulwazi olungcono kakhulu kuwe ngaphambi kokuba luqale ukuyihlola futhi lusetshenziswa ochwepheshe bezimayini zombhalo futhi. Ama-hyper-parameters ayo enza kube lula ngawe ukuthi ukhethe idatha engenamaphutha futhi uyifinyelele kufomethi oyifunayo.
3. I-Facebook ne-Twitter API
Ochwepheshe bezokuxhumana bezenhlalakahle, iziqalo kanye nabangewona izinhlelo, i-Facebook ne-Twitter API isebenza kahle. Banikeza ngamasevisi okukhipha idatha ngokusebenzisa ama-API athile futhi uthatha amaminithi ambalwa nje ukuze uthole idatha yakho igwetshwe kwifomethi oyifunayo. Isebenzisa imithombo echaziwe ukudala amathasetha bese ikhahla amakhasi akho wewebhu ngesikhathi esithile, ngaphandle kwamakhono okuhlela nolwazi lwezobuchwepheshe. Usizo lwe-API ukuxazulula izinkinga ezihlobene nedatha ehlukene, ukubona futhi uhlele amaphutha kumbhalo wakho, futhi uthole ulwazi oluphezulu kusuka kokubili izithombe namavidiyo abasebenzisi.
4. I-Scraper (i-Chrome Extension)
Uma usebenzisa njalo i-Google Chrome futhi isiphequluli sakho sewebhu esiyinhloko, uzama ukuzama ukukhipha isikrini. Kuyinto yezinhlelo ezinhle kakhulu zokusebenza zokudatha idatha. Yakhiwe ngobuchwepheshe bokufunda umshini futhi yenzelwe ngqo abantu abangewona izinhlelo. I-scraper ingakhipha ulwazi oluwusizo kuwe futhi inezinto eziningi ezivelele. Okukhethwa kukho okutholakala kogaxekile okukuyo kukuvumela ukuthi ulahle idatha yogaxekile futhi uhlele ulwazi ngokusekelwe ezimfuno zakho, ngaphandle kwamaphutha noma isipelingi. I-Scraper ibuye isize ukuhlaziya okuthunyelwe kwamazwana nama-imeyili, ukukuthola idatha ekhishwe kahle, futhi inquma ukuthi iyasiza ebhizinisini lakho noma cha.
Ngokungafani namanye amathuluzi ajwayelekile wokuhlunga idatha, amasevisi angenhla angu-4 ayidingi ukuba ube nomqondo wezobuchwepheshe. Futhi, akudingeki ufunde izilimi zokuhlela ukuze uzuze kulezi ze-scrapers idatha . Kumele ufake futhi ubenze kusebenze ukuze bazuze ekukhethweni kwabo kanye nezici zokukhipha idatha.